Hay’adda diyakooniya oo in ka badan 40 qof u qabatay tababar kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadaha dhallinta. – Radio Daljir
Hay’adda diyakooniya oo in ka badan 40 qof u qabatay tababar kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadaha dhallinta.
Hay\_’adda Diyakooniya ayaa maanta kulan aqooneed ku qabatay xarunta GECPD ee magaalada Galkacyo kaasi oo lagu gorfaynayey sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadaha shaqo ee dhallinyarada.
Tababarkaan ku saabsanaa kordhinta aqoonta iyo xirfadaha dhallinyarada ayaa waxaa ka qayb-galayey in badan 40 qof oo ka kala socotay ururrada bulshada iyo qaar ka mid ah ha\_’adaha dawladda, sida wasaaradaha haweenka iyo qorshaynta, maamulka gobolka, iyo ururrada haweenk iyo dhallinyarada.
Intii uu socday tababarku, waxaa looga looga faa\_’idaystay sidii wax looga baddeli lahaa aqoonta iyo xirfadaha da\_’yarta iyadoo loo marayo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshad taas oo looga golleeyahay in la yareeyo shaqlo la\_’aanta dhallinta oo haatan la dareensan yahay heerka ay marayso.
Guddoomiyaha kuxigeenka gobolka Mudug Bashiir Maxamed Mire oo ka hadlay kulanka maanta ayaa ku dheeraaday ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay kor u qaadidda xirfadaha dhallinyarada, waxaana uu sheegay hay\_’adaha dawladda iyo kuwa bulshaduba in ay kaalin muuqata ka qaataan hirgalinta xirfado shaqo si baahida shaqo la\_’aanta loo yareeyo.
Ka qaybgalayaashii tababarka oo kala ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyaguna halkaasi ka ballan-qaaday in ay abuuri doonaan xirfado sahli doono kordhinta aqoonta da\_’yarta, waxaana haddii lagu guulaysto arrintaasi meesha ka bixi doonta in badan oo dhallinyaro shaqo la\_’aani haysay ah.
Farxaan Jeemis Cabddulle,